Appuyer les actions en faveur de la lutte contre la corruption
Richard Rakoto il y a 3 mois
La clôture des Masters class sur la lutte contre la corruption à l’endroit des lycées et universités est faite le mercredi 25 août 2021 à l’IKM Antsahavola.
Fikambanana vehivavy manana fahasembanana eto Mada
Folo taona nifampitsinjovana sy nifanampiana
Mankalaza ny fahafolo taonany ny fikambanana « Association des Femmes Handicapées de Madagascar » Afham, fikambanan’ireo vehivavy manana fahasembanana. Izany no nivoitra nandritra ny resadresaka nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety ny alatsinainy 24 aogositra teny Antanimena.
Rano fidiovana sy fanadiovana
Arindra ny fiaraha-miasa mba ahazoana tombontsoa iombonana
Notontosaina ny zoma 20 aogositra tao Anosy ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny ny rano, fanadiovana sy fidiovana ary ny Wateraid. Ary nisy koa ny fanentanana nataon’ny Wateraid ny sabotsy 21 aogositra tamina kaominina roa teny Antananarivo Atsimondrano.
Mahazo vahana ny tontolo anjakan’ny kolontsain’ny lainga
Tsy ilaozana zavatra mahatalanjona mitranga eto amin’ity firenena ity isan-kerinandro izao. Variana tamin’ny raharaha “apollo 21” nandritra ny andro maro izay mifandrohy amina zavatra maro ny mpanara-baovao, ary mbola andrasana ny marina momba azy. Dia teo ny fiandrasana ny fahaterahan’ny governemanta vaovao izay mitana ny akom-baovao amin’izao fiandohan’ny herinandro izao, taorian’ny fahadisoam-panantenan’ny nino fa hidina ny vidin-javatra afaka hateloana, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena. Zava-mivaingana anefa no andrandrain’ny maro raha ny hevitra mipoitra etsy sy eroa. Fifampizarana.
Ny tanora sendikalista miahy ny fiahiana ara-tsosialiny.
Willy Rasolonjatovo il y a 3 mois
Nanao hetsika nentina nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora ny Randrana sendikaly ny alakamisy 12 aogositra teny Analakely.
Voakasik’izany ireo tompon’ny tany mbola tsy nahazo onitra (tetikasa ROCADE)
Ho tohin’ny fampiharana ny fanonerana ny tompon’ny tany voakasika tamin’ny fanamboaran-dalana ROCADE dia miantso ireo tompon’ny tany voakasika ary misy olana ny eo anvionny Minisitera ka tahaka izao ny tetiandro fitsinjarana ny fotoana araka ny fanambarana avy amin’ny Ministera.